Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Mid Phone in kale
Kala beddelashada xiriirada ka mid phone mid kale ma u leeyihiin in ay adag tahay. Iyadoo qorshe sax ah iyo qalabka xaq, uma baahnid inaad wax laga walwalo sida cotnacts si ay u gudbiyaan si phone cusub. Dhibaatada waxa ay tahay in ay jirto si yihiin Casharrada aad u badan oo ku saabsan sida saxda ah si ay u gudbiyaan xiriirada, waa mid aad u fudud in laga badiyay. Halkan waxaan kaala hadli doona siyaabo kala duwan oo ka yimid iPhone in Android, xiriirada kala iibsiga ka Android inay iPhone iyo xiriirada kala iibsiga wareejiyo xiriirada ka Android inay Android. Bal aynu eegno sida aad si fudud ku wareejin karaa xidhiidhka ka dhexeeya telefoonada kuwan.
Qeybta 1: Transfer Xiriirada ka iPhone in Android
Qeybta 2: TransferContacts ka Android inay iPhone
Qaybta 3. Transfer Xiriirada ka Android inay Android
Qaybta 4. Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka qalab kale si ay Android ama iPhone
Qaybta 1. Transfer Xiriirada ka iPhone in Android
Habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan xiriirada Android noqon doonaa in ay isticmaalaan arji desktop allmighty in uu yahay mid aad u fudud in ay la tacaalaan oo u fududayn kartaa xanuun oo dhan. Wondershare MobileTrans noqon doonaa sida qalab la yaab leh. Waxaa effortlessly la mid click wareejin karaan xiriirada aad u dhexeeya telefoonada Android kala duwan ama iPhone mar labada telefoonada aad ku xirnayn galay kombiyuutarka aad leedahay. Intaa waxaa dheer, Wondershare MobileTrans kaa caawinaysaa in aad si wareejiyo aad xiriirada Android inay computer iyo marka aad leedahay telefoonka kale, waxaad karaa soo celinta aad xiriirada Android si fudud.
Tallaabada ugu horreysa marka aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada aad ka iPhone in Android waa in gurmad aad xiriirada in iCloud. Tani waa mid aad u fudud, u tag iCloud iyo login in aad xisaabta.
Marka saxiixay click on Xiriirada. Waa in aad xiriir ah in lagu xoojiyaa in iCloud. Wax sidan oo kale.
Waxaad ka dhan xiriirada dooro adigoo riixaya Ctrl + A. Markaas riix doonaa Button goobaha ee geeska hoose ee bidixda ka dibna dooro "Dhoofinta vCard".
Waxaad markaas u baahan doontaa inaad gasho in aad xisaab Gmail. Marka aad si guul leh ku qortey ayaa ku guji "contacts dejinta" iyo dooran vCard laga dhoofiyey iyo guji dejinta oo dhan. Dhammaan faylasha aad la keeno doonaa Google Xiriirada.
Waxaa muhiim ah in aad ku milmaan oo dhan xiriir la labalaabka ka hor soo celinta qalabka Android aad. Marka liiska xiriirada uu la nadiifinayaa oo si fiican biireen, waxaa la gaadhay wakhtigii si loo soo celiyo xiriirada qalab Android aad.
On qalab Android si aad u Menu tago markaas Settings iyo xisaabta iyo nidaameed. Riix Account Add ka dibna dooro Google.
Gudaha gal in aad xisaabta Google. Marka aad adigu saxiixday in hadda uun sax karaa sanduuqa oranaya "nidaameed Contact" ka dibna garaac Finish. Waxay u ekaan doonaa wax sidan oo kale.
Hambalyo, aad haatan wareejiyo dhammaan xiriirada aad ka iPhone in aad Device Android.
Qaybta 2. Transfer Xiriirada ka Android inay iPhone
Haddii aad iibsaday iPhone cusub oo aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xiriirada aad ka qalab Android aad si aad iPhone, halkaan sida loo sameeyo si fudud.
Waxaad u baahan doontaa in aad xisaab Gmail. Haddii aadan haysan mid, saxiixin dhowr daqiiqadood qaadan doonaa. Marka aad leedahay xisaab Gmail, halkan waxa aad u baahan tahay in la sameeyo.
On qalab Android u furay xiriir ah oo guji badhanka menu. Halkan, dooro darsamaan Google si ay u dajiyaan aad xiriirada in Google.
Waxaad ka heli doontaa xiriirada ee Google. Markii uu abaabulo xiriirada iyo tirtirto tus wax u qaado. Hadda waa waqtigii ay u guuraan xiriirrada cusub si cusub oo aad iPhone.
On iPhone, dooro goobaha ka dibna Mail, Xiriirada, Kalandarada. Waa in ay eegaan wax sidan oo kale.
Darsada xisaabta Gmail shaashadda soo socda oo dhan Xiriirada ku saabsan xisaabtaada Google si otomaatik ah laga keeno doonaa iPhone aad.
Waa in si fudud.
Kala beddelashada xiriirada ka Anroid in Android waa mid aad u fudud. Xaaladaha intooda badan xiriir aad si toos ah synced doonaa marka ugu horreysa ee aad noqon aad telefoon cusub Android. Tani waa ku sii meel aad saxiixay in aad xisaabta Google qalabka Android aad.
Haddii aadan waxba ku arki kartaa xiriirada aad Google xiriirada, halkan sida loo hagaagsan aad xiriirka la leedahay in aad xisaabta Gmail si aad telefoon.
• Hubi in Gmail la geliyo telefoonka aad
• On khaanadda App ah, u tag goobaha ka dibna garaac "Xisaabaadka iyo nidaameed"
• Hubi in Xisaabaadka iyo adeegga syncing waxaa u suurta
• On aad email akoonka dhigay ilaa ay doortaan Gmail iyo hubi in aad karti nidaameed Xiriirada ikhtiyaarka
u hagaagsan • Press hadda iyo xiriirada aad waa in la beehsa la xisaabtaada Gmail
Kala beddelashada xiriirada ka Android inay iPhone ama Android inay Android waa u fududahay. Dhibku haddaba wuxuu imanayaa marka aad rabto in aad xogta ka soo telefoonada kale si iPhone ama Android wareejiyo. Dadka intooda badan waxay la kulmaan dhibaatooyin marka la isku dayayo in lagu wareejiyo xogta laga waxaad dhahdaa Blackberry ama Nokia in aalad Android ama iPhone ah.
Waa Wondershare MobileTrans ahaado Software doorashada haddii aad raadinayso si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka, photos, music, video iyo barnaamijyadooda ka mid phone in kale. Quruxdii dadka isticmaalaya Wondershare MobileTrans waa in ay u shaqayso si aad u fudud. Waxaad ku wareejin kartaa dhammaan xogta aad ka mid click.
Hababka kale ee aanu kor looga hadlay kaa caawin kartaa inaad wareejiso xiriirada laakiin xogta aan kale. Wondershare MobileTrans Kaa caawin doona inaad hesho dhammaan macluumaadka aad rabto in aad teleefon kasta si kale oo dhan ee hal click.
Bedelka Xiriirada ma aha oo kaliya
Ka sokow xiriirada, aad wareejin karaan barnaamijyadooda, fariimaha, photos, music, video, jadwalka iyo Guda yeedha.
Warbixiinta Contact gurmad
Waxa aad awood u Macdan hayaan sameeyo Kies, iCloud, Lugood iyo Blackberry Desktop Suite iyo xiriirada kala iibsiga si aad Android.
Taageerada 3000+ Devices
100% la jaan qaada in ka badan 3,000 oo telefoonada Android iyo kiniiniyada soo saaray Samsung, HTC, Motorola, LG, Sony, Huawei, ZTE iyo in ka badan.
Maamul Your Android
Waxaad isticmaali kartaa MobileTrans si ay u maareeyaan xog ku saabsan qalabka Android aad sida dhoofinta xogta ku saabsan Android inay computer sidii gurmad ah.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay Android Phones Si fudud